Paintless Mmezi Idozi Mmezi Ngwaọrụ
Teknụzụ nke Ngwongwo Ntucha Na-enweghị Pụrụ Iche Ngwá Ọrụ Mmezi
Gịnị bụ Paintless Dent Mmezi?
Ndozi na-enweghị ntụpọ (PDR) bụ usoro iji wepu nkụkọ na ntụpọ ndị ọzọ site na elu ụgbọ ala na-enweghị iji nzacha ahụ ma ọ bụ etegharị. Ọ bụrụ na agba dị na ụgbọala ahụ mebie, PDR enweghị ike iji rụkwaa ụgbọ ahụ. Dents na-arụzikarị azụ site na azụ. Nke ...
Ihe Ọmụma Banyere Mmezi Igwe Igwe
Ugbu a, ndị iko na ụgbọ ala na-tumadi kewara abụọ ihe, laminated iko na n'obi iko. Laminated larịị bụ iko nwere akwa oyi akwa na ihe nkiri plastik n’etiti ha nke anaghị agbawa agbawa ma gbasaa kpamkpam n’ihe gbasara mmebi na mgbawa. N'ihi nke a...
Etu aga-esi jiri Ngwá Ọrụ rụzigharị ụgbọala
Ngwongwo ihe eji arụ ọrụ ụgbọ, bụ olulu nke mpụga ụgbọ ala na-enweghị eserese ma ọ bụghị mpempe akwụkwọ nwere ngwaọrụ pụrụ iche, na nke mbụ otu. Ya mere, olee isi ihe ọmụma dị na iji ngwa nrụzi ịda mba, nke ọ dị mkpa ka onye ọ bụla mara ya? 1, c ...
Ejiri Mmetụta ressionda Mbà na Aka Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ
Otu uru, nrụzi mmetụta dị mma. Mmezi olulu site na iji teknụzụ patented na usoro dị mfe, iji chekwaa ọnọdụ mbụ nke agba, nke mere na echekwara uru mbụ nke ụgbọala ahụ ma gosipụta ya. Omenala mpempe akwụkwọ ọdịnala iji gafee mpempe akwụkwọ ...
Common Manual Tools N'ihi Automotive mpempe akwụkwọ Metal
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ụgbọ ala bụ usoro eji arụkwa ụgbọ ala, nke a makwaara dị ka ọrụ oyi. Ọ bụrụ na ọdịdị nke ụgbọ ala ahụ mebiri emebi ma gbanwee, achọrọ usoro mpempe akwụkwọ. Mkpụrụ nkwekọ ụgbọala arụpụtarala na mbụ "smash ịgbado ọkụ sere mmezi ...
Otu uru, nrụzi mmetụta dị mma. Mmezi olulu site na iji teknụzụ patented na usoro dị mfe, iji chekwaa ọnọdụ mbụ nke agba, nke mere na echekwara uru mbụ nke ụgbọala ahụ ma gosipụta ya. Omenala mpempe akwụkwọ ọdịnala iji gafere site na mpempe akwụkwọ, hichapụ ndị sputyours, pa ...
Car Dent rụkwaa arụmọrụ nkọwa
mmezi nke mkpuchi ihu. Ndozi mkpuchi ihu dịtụ mfe, dịka ọnọdụ iji wepụ mkpuchi ma ọ bụ kpochapu nrapado ma ọ bụ ọkpọ nwere ike rụzie, ọ dị mkpa iburu n'uche na ebe ọgụ ahụ ịhọrọ na mpaghara zoro ezo nwere ike ịbụ. mmezi nke akwukwo ihu ...